အိမ် မှာ ကလေး နှစ်ယောက် ကျန်ခဲ့လို့ ဆေးရုံ မသွားချင် တဲ့ ကိုဗစ်လူနာ (ကိုဗစ်ဖြစ်ရင် မိသားစုနဲ့ ခွဲကို ခွဲရမှာပါ) – Shwe Sar
အိမ် မှာ ကလေး နှစ်ယောက် ကျန်ခဲ့လို့ ဆေးရုံ မသွားချင် တဲ့ ကိုဗစ်လူနာ (ကိုဗစ်ဖြစ်ရင် မိသားစုနဲ့ ခွဲကို ခွဲရမှာပါ)
By Shwe SarPosted on November 17, 2020
ကိုဗစ် +ive လူနာနံပါတ်(၅) ဖျားနာရောဂါကု ဆေးခန်း။ ၁၅၊၁၁၊၂၀၂၀(တနင်္ဂနွေနေ့) ယနေ့အတွက် ၂၀ ယောက်မြောက်၊ ဆေးခန်းပိတ်ခါနီးမှ ရောက်လာတဲ့ လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသ မီး လူ နာ၊ ယောက်ျားက ဆိုက်ကားနဲ့ လာပို့တယ်။ ဖျားတာ ၃ ရက်၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ အနံ့မရတာက ၂ ရက် မို့ ဆေးခန်းလာပြတာတဲ့။ ယောက်ျားက ဒီလေါက်လေးနဲ့ လာပြရမလား ဆိုပီး စိ တ်တိုနေတယ်။ လာတာက နေ့တိုင်း P ထွက်နေတဲ့ ရပ်ကွက်က။ ကလေး ၂ ယောက် လူမမယ်လေးတွေနဲ့၊ ပေါင်းအိမ်သား ၄ ယောက် ရှိတယ်။ ဆရာဝန်က ရာဇဝင်မေး ရောဂါလက္ခ ဏါ စစ်ဆေးပီးသံသယ လူနာသတ်မှတ်တယ်။ ဆေးရုံကို inform referal လုပ်၊ PUI.. ၅ ယောက် မြောက် စာရင်းသွင်းပြီး swab ယူဘို့လုပ်တယ်။ အဲ့ဒီမှါဇာတ်လမ်း စတာဘဲ။ ကျွန် မမစစ်ဘူး၊ ဆေးရုံလဲ မသွားနိုင်ဘူး၊ ယောက်ျားကလည်းမကြည်ဘူး၊ အိမ်မှာ ကလေး နှစ်ယောက်ကလည်း အရွယ်မရောက်သေး၊ အိမ်မှာ ကျမရှိမှ ဖြစ်မှာတဲ့။ swab ယူတဲ့ သမီးေ လး က ဖုန်းနဲ့ပြောတယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ရ မလည်းတဲ့။ p ထွက်နေကျရပ်ကွက်က လာတယ်၊ လက္ခဏါတွေလည်းရှိတယ်၊ ချော့မော့ပြောပြီး ယူလို့။
ခနနေတော့ ပြန်ဆက်တယ်။ ဘယ်လိုချော့လို့မှ မရဘူး၊ ငိုယိုပီး သူ့ကို သောက်ဆေးဘဲ ပေးလိုက်ပါ။ ဘယ်မှလည်း မထွက်တော့ပါဘူး၊ ကလေးတွေ ဒုက္ခရောက်မှာ မို့ပါတဲ့။ ကဲ သမီးရေ မ ယူဘဲ ပြန်လွှတ်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး၊ နဲနဲ ခြိမ်းခြောက်လိုက်၊ ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမယ်၊ လာဖမ်းမယ်လို့သာ ပြောဆိုတော့မှ swab ယူလို့ရတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ နံပါတ် ၅ အပါအဝင် သံသယ လူ နာ ၅ယောက် စလုံး P ထွက်ပါတယ်။ Swab ယူတဲ့ သမီးလေး ရောက် လာပီးတော့ ဆရာကြီးရယ် သမီးရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ၊ အိမ်မှာလည်း ဘာမှ ရှိပုံမရဘူး၊ ထမင်းလည်း မ စား ရသေးဘူးနဲ့ တူတယ်တဲ့။ ဆရာဌေးအောင်က သူစားမဲ့ ထမင်းဘူးကို ပေးခိုင်းလိုက်တယ်။ ဆရာအာကာကလည်း ကျနော်တို့ စုပီးထောက်ပံ့ရအောင် ဆိုပီး ငွေလိုက်စုလို့ရတဲ့ ၃ သော င်းကို လိုအပ်တာသုံးဖို့ ပေးလိုက်ပြီး တိုင်းရင်းဆေးရုံကို ambulance နဲ့ ပို့ပေးရတယ်။
စိတ်ထဲလည်း မကောင်းဘူး၊ မိသားစုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေလည်း မစဉ်းစားခြင်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သတိပေး၊ အသိပေးခြင်တာက ကိုဗစ်ကြောင့် သေတာ မသေတာက နော က် ထား။ လတ်တလော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဒုက္ခရော၊ အိမ်က မိသားစုတွေရဲ့ ဒုက္ခရော၊ တအိမ်လုံး ကလေးလူကြီး ဘိုးဘွားမကျန် Qဝင်ရမှာ တွေရော…. ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါလို့။ ကပ်ေ ရာ ဂါ အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ လူမှုဒုက္ခများမှလည်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
ကိုဗဈ +ive လူနာနံပါတျ(၅) ဖြားနာ ရောဂါကု ဆေးခနျး။ ၁၅၊၁၁၊၂၀၂၀(တနင်ျဂနှနေေ့) ယနအေ့တှကျ ၂၀ ယောကျမွောကျ၊ ဆေးခနျးပိတျခါနီးမှ ရောကျလာတဲ့ လူလတျပိုငျး အ မြိုးသ မီး လူ နာ၊ ယောကျြားက ဆိုကျကားနဲ့ လာပို့တယျ။ ဖြားတာ ၃ ရကျ၊ နှာစေးခြောငျးဆိုး၊ အနံ့မရတာက ၂ ရကျ မို့ ဆေးခနျးလာပွတာတဲ့။ ယောကျြားက ဒီလေါကျလေးနဲ့ လာ ပွရ မလား ဆိုပီး စိ တျတိုနတေယျ။ လာတာက နတေို့ငျး P ထှကျနတေဲ့ ရပျကှကျက။ ကလေး ၂ ယောကျ လူမမယျလေးတှနေဲ့၊ ပေါငျးအိမျသား ၄ ယောကျ ရှိတယျ။ ဆရာဝနျက ရာဇဝ ငျမေး ရောဂါလက်ခ ဏါ စဈဆေးပီးသံသယ လူနာသတျမှတျတယျ။ ဆေးရုံကို inform referal လုပျ၊ PUI.. ၅ ယောကျ မွောကျ စာရငျးသှငျးပွီး swab ယူ ဘို့လုပျတ ယျ ။ အဲ့ဒီမှါဇာတျလမျး စတာဘဲ။ ကှ နျြ မမစဈဘူး၊ ဆေးရုံလဲ မသှားနိုငျဘူး၊ ယောကျြားကလညျးမကွညျဘူး၊ အိမျမှာ ကလေး နှဈယောကျကလညျး အရှယျမရောကျသေး၊ အိမျ မှာ ကမြရှိမှ ဖွဈမှာတဲ့။ swab ယူတဲ့ သမီးေ လး က ဖုနျးနဲ့ပွောတယျ၊ ဘယျလို လုပျရ မလညျးတဲ့။ p ထှကျနကေရြပျကှကျက လာတယျ၊ လက်ခဏါတှလေညျးရှိတယျ၊ ခြော့ မော့ပွောပွီး ယူလို့။
ခနနတေော့ ပွနျဆကျတယျ။ ဘယျလိုခြော့လို့မှ မရဘူး၊ ငိုယိုပီး သူ့ကို သောကျဆေးဘဲ ပေးလိုကျပါ။ ဘယျမှလညျး မထှကျတော့ပါဘူး၊ ကလေးတှေ ဒုက်ခရောကျမှာ မို့ပါတဲ့။ ကဲ သမီးရေ မ ယူဘဲ ပွနျလှ တျလို့တော့ မဖွဈဘူး၊ နဲနဲ ခွိမျးခွောကျလိုကျ၊ ဥပဒအေရ အရေးယူ ခံရမယျ၊ လာဖမျးမယျလို့သာ ပွောဆိုတော့မှ swab ယူလို့ရတယျ။ ဟုတျကဲ့ နံပါတျ ၅ အပါအဝငျ သံသယ လူ နာ ၅ယောကျ စလုံး P ထှကျပါတယျ။ Swab ယူတဲ့ သမီးလေး ရောကျ လာပီးတော့ ဆရာကွီးရယျ သမီးရငျထဲ မကောငျးလိုကျတာ၊ အိမျမှာလညျး ဘာမှ ရှိပုံမရဘူး၊ ထမငျးလညျး မ စား ရသေးဘူးနဲ့ တူတယျတဲ့။ ဆရာဌေးအောငျက သူစားမဲ့ ထမငျးဘူးကို ပေးခိုငျးလိုကျတယျ။ ဆရာအာကာကလညျး ကနြျောတို့ စုပီးထောကျပံ့ရအောငျ ဆိုပီး ငှလေိုကျစုလို့ရတဲ့ ၃ သော ငျးကို လိုအပျတာသုံးဖို့ ပေးလိုကျပွီး တိုငျးရငျးဆေးရုံကို ambulance နဲ့ ပို့ပေးရတယျ။
စိတျထဲလညျး မကောငျးဘူး၊ မိသားစုရဲ့ နောကျဆကျတှဲပွသနာတှလေညျး မစဉျးစားခွငျတော့ဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သတိပေး၊ အသိပေးခွငျတာက ကိုဗဈကွောငျ့ သတော မသတောက နော ကျ ထား။ လတျတလော ကိုယျကိုယျတိုငျရဲ့ ဒုက်ခရော၊ အိမျက မိသားစုတှရေဲ့ ဒုက်ခရော၊ တအိမျလုံး ကလေးလူကွီး ဘိုးဘှားမကနျြ Qဝငျရမှာ တှရေော…. ထညျ့သှငျးစဉျးစားကွပါလို့။ က ပျေ ရာ ဂါ အပေါငျးမှ ကငျးဝေးကွပါစေ။ လူမှုဒုက်ခမြားမှလညျး ကငျးဝေးကွပါစေ။
Previous post ဂိမ်းရှုံးလို့အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့စစ်သွေးကို ဗီဒီယိုလေးအမိအရရိုက်ကာဆေးအကြီးကြီး ထိုးလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Next post အတွင်း သားတွေ အထင်သားပေါ်လွင်အောင် ပိုစ့်ပေးကြမ်း လွန်းနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ